ရှမ်းပြည် တောင်ပိုင်း အလည်သွားမယ် (5 )…မွေတော်ကက္ကူ ဘုရား… | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Photography » ရှမ်းပြည် တောင်ပိုင်း အလည်သွားမယ် (5 )…မွေတော်ကက္ကူ ဘုရား…	29
ရှမ်းပြည် တောင်ပိုင်း အလည်သွားမယ် (5 )…မွေတော်ကက္ကူ ဘုရား…
Posted by Ma Ei on Jul 11, 2012 in Photography, Travel | 29 comments
မွေတော်ကက္ကူ စေတီကို အရင်ဆုံး သွားရောက်ဖူးမြော်ကြပြီး အဲ့ဒီကမှ ထန်စမ်းဂူ၊
တောင်ကြီးစူဠာမုနိဘုရား၊ရပ်တော်မူဘုရားကြီး၊တောင်ပေါ်ဘုရားများနှင့်တောင်ကြီးဈေး တို့ကိုလည်ကြမယ်လို့ ခရီးစဉ်ဆွဲလိုက်ပါတယ်…
တောင်ကြီးအတက်လမ်းအစမှာ အေးသာယာ စပျစ်ဝိုင်ခြံရှိပါတယ်…နိုင်ငံခြားစံချိန်မှီ ၀ိုင်နီ၊၀ိုင်ဖြူ များထုတ်လုပ်ပါတယ်…
ခြံထဲမှာ စပျစ်ပင် စိုက်ခင်းများနဲ့ ၀ိုင်ထုတ်လုပ်မှုကို ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပြီး စားသောက်ဆိုင်လဲရှိပါတယ်…
တောင်ကြီးမှ မွေတော်ကက္ကူ အသွားလမ်းမှာကြက်သွန်ဖြူစိုက်ခင်းတွေ ယာခင်းတွေ စပါးစိုက်ခင်းတွေနဲ့
ပြောင်းဖူးတွဲတွေ၊ကြက်သွန်ဖြူအမိတ်နဲ့ အစည်းလိုက် စီချိတ်ထားတဲ့ပအို့ပ် အိမ်ကလေးတွေတောင်တန်းတွေကို
မြင်ရတာ ကြည်နူးစရာကောင်းပြီး အရမ်းလှတဲ့ လမ်းကလေးဖြစ်ကြောင်း အမှတ်ထင်ထင်ရှိခဲ့ပါတယ်…
မမျှော်လင့်မိတာက အရင်တုံးက ရှိခဲ့တဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ စိုက်ခင်းများနေရာမှာ အခုတော့ လူနေအိမ်ခြေတွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတာပါ…
အချို့နေရာတွေကတော့ခြံခတ်ထားတဲ့ အနေအထားမှာဘဲရှိပြီး၊ လက်ဘက်ပင်၊စပါးခင်း စိုက်ပျိုးထားတဲ့ လယ်ယာ
လမ်းတစ်လျှောက် လမ်းဘေးမှာ၊ လူနေအိမ်ခြံဝင်းဘေးမှာ၊ခြံထဲမှာ အလေ့ကျပေါက်လို့ လှပစွာဖူးပွင့်နေတဲ့
ကျမတို့ မိန်းကလေးတွေအားလုံး ခဏခဏပြောမိတဲ့စကားကို အမှတ်ရလိုက်ပါတယ်…
လှပတဲ့ ပန်းကလေးတွေပွင့်နေတဲ့ လမ်းတစ်လျှောက်ဖြတ်သန်းမောင်းနှင်ခဲ့ရင်း ကျောက်တစ်လုံးဘူတာရုံ မီးရထားလမ်းကလေးကို
ကျော်လိုက်ပြီးချိန် ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ မွေတော်ကက္ကူစေတီတော်များကို လှမ်းမြင်ရပြီဖြစ်ပါတယ်…
မွေတော်ကက္ကူစေတီတော်များသည် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း တောင်ကြီးခရိုင်၊ ကျောက်တစ်လုံးကြီးမြို့နယ်၊နောင်ခဲုင်းကျေးရွာအုပ်စု
ပအိုဝ်း တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားအရ ကက်မှာ ကင်းစခန်း၊ ကူမှာ နယ်ခြားဖြစ်၍ ကက္ကူသည် နယ်ခြားစခန်းဖြစ်သည်။
ရှေးမခါက ဤဒေသသည် ဆီဆိုင်စော်ဘွားနှင့် ညောင်ရွှေစော်ဘွားနယ်စပ်ဒေသဖြစ်၍ နယ်ခြားကင်းစခန်းနေရာတွင်
တည်ရှိသောဘုရား ကက္ကူဘုရားဟု ခေါ်ဆိုကြခြင်းဖြစ်သည်။
သီရိဓမ္မာသောကမင်းကြီးတည်သော စေတီပေါင်းရှစ်သောင်းလေးထောင်တွင်ပါဝင်သော စေတီတစ်ဆူဖြစ်ပြီး
ဤကက္ကူစေတီစုတွင် ဂေါတမ ဘုရားရှင်ဓါတ်တော်မွေတော်များကို ဌာပနာ ထားသော်လည်း ဘဒ္ဒကမ္ဘာတွင်ရှေးဦးစွာ
ပွင့်တော်မူသော ကကုသန် ဘုရားရှင်ဘွဲ့အမည်တော်ကို ပူဇော်၍ ကက္ကူ ဘုရားဟုခေါ်ဆိုကြောင်း
စေတီသမိုင်းမှတ်တမ်းစာအုပ်၌ ဖော်ပြထားပါသည်။ စေတီတော်များအရေအတွက်ကို တောင်သူကွမ်းညှပ်
တဖြတ်ဖြတ် 7623 ဆူတည်ထားခဲ့ကြောင်း စာချိုးလို့မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြပါတယ်။
အရင်က အနက်ရောင်နယ်မြေမှ စေတီတော်တွေကို ဖူးခွင့်ရပြီးမကြာခင် စတင်ပြင်ဆင်နေချိန်ဖူးခဲ့ရစဉ်က
စိတ်မချမ်းမြေ့စရာ စေတီပြို စေတီပျက်အများစုကိုသာတွေ့မြင်ခဲ့ရပြီး နောက်အခေါက် နောက်အခေါက်များမှာအသစ်
အသစ်တွေဖြစ်နေခဲ့ပြီး ခုတစ်ခေါက်တော့ဖြင့် အသစ်ကနေ အဟောင်းပြန်ဖြစ်နေပြန်ပါပြီ…
ထူးခြားစွာ သပ္မါယ်လှတဲ့ ဆင်းတုတော်ကိုလည်းဖူးတွေ့ခဲ့ရပါတယ်…
2…တည်ထားစေတီ အစီအရီ …
ရင်ပြင်တော်မှ မြောက်ဘက်စောင်းတန်းအတိုင်းအပြင်ကိုလာလိုက်တဲ့အခါ လှပတဲ့မြင်ကွင်းလေးကဆီးကြိုနေပါတယ်…
ကွေ့ဝိုက်စီးဆင်းနေတဲ့ချောင်းကလေး စိုက်ပြီးစ လယ်ကွင်း နဲ့ လယ်စောင့်တဲကလေး စေတီတော်များဘက်ကို
ပြန်ကြည့်မိတော့ လှပတဲ့တိမ်ကလေးတွေ နဲ့ ပဏာရနေပြန်တဲ့ စေတီတော်တွေ ဆေးပန်းချီ ရေးမမှီနိုင်အောင်လှပတယ်လို့
15…ရှမ်းခေါက်ဆွဲ နှင့် တို့ဟူးကြော်…
17…ဆရာမ ကို ကြိုဆိုကြတဲ့ နောင်ကားရွာ…
ညောင်ပိန္နဲပင်ကြီးများအောက်က တောင်ရိုးသူများထံမှာ ကြက်သွန်ဖြူ၊စွန်တန်၊မက်မွန်သီး၊နေကြာစေ့များ
စုံနေအောင်ဝယ်ကြ၊ဓါတ်ပုံရိုက်ကြပါတယ်…ရန်ကုန်ဈေးထက် တ၀က်သက်သာနေတာတောင် ဈေးဆစ်နေမိလို့ ရီရသေးတယ်…
ရှမ်းခေါက်ဆွဲ တို့ဟူးကြော် နဲ့ ကောက်ညင်းကွက်ကြော်တို့ကလဲ စားကောင်းလှပါတယ်…
အပြန်လမ်းမှာ ဆိုင်ကယ်တွေ၊လူတွေ ရှမ်းအိုးစည်တွေနဲ့ စည်ကားနေတာပွဲတော်တစ်ခုလို့ထင်ရပါတယ်…
ကားသမားက ဆရာမ ရောက်လာလို့ ရွာသူရွာသားများက ကြိုဆိုကြတာလို့ ပြောပြပါတယ်…
ရွာဆိုင်းဘုတ်ကိုကြည့်မိတော့ နောင်ကားစံပြကျေးရွာ တဲ့ ဆရာမလေးတွေလဲပျော်နေကြတယ်..
ပြုံးပျော်နေကြတဲ့ ရွာသူ ရွာသားများကိုကြည့်လို့ အပျော်တွေကူးစက်ခဲ့ရပါတယ်…
Ma Ei has written 38 post in this blog.
mamanoyar says: မမအိရေ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ကိုဘာကြောင့်မှန်းမသိ
အရမ်းချစ်တာပဲ အရမ်းသွားချင်တာ အခု ပုံလေးတွေ မြင်ရတော့
ပိုပြီးသွားချင်တယ် ဒီနှစ်တန်ဆောင်တိုင်တော့ ရောက်အောင်သွားမယ်လို့
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1396
Ma Ei says: တန်ဆောင်တိုင် မီးပုံးပျံပွဲတော်
စည်ကားလှပ သလောက် အရမ်းအေးတယ်…
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 823
may flowers says: အော်………..တော်သေးတာပေါ့မအိရယ်………….မျှော်လိုက်ရတာမောလို့ ခုမှပဲတင်ပေးတော့တယ်
စောင့်ပြီး ဖတ်ချင်ကြည့်ချင်ပါတယ် ဆိုမှ……….။
ခုလည်း အားပေးသွားပါတယ် နောက်ပုံတွေလဲကြာနဲ့နော်။
Ma Ei says: ဆက်ရေးနေပါတယ်ကွယ်…
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 143
ဟိန်း ၀င်း (ထားဝယ်သား) says: သွားဖူးသော်လဲ နောက်ထပ်ထပ်သွားချင်တဲ့နေရာလေးတွေပေါ့ဗျာ ……
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 728
Mon Kit says: “”" ပျိုပျိုမေ xxx အလည်အပတ်ထွက်တယ် xxxx မော်တော်ကားနဲ့ရယ်xxxx
ရှမ်းပြည်ကို တောင်ပိုင်းရော xx မြောက်ပိုင်းရောကွယ်xx နှံ့ခဲ့တယ်xxxxxxx”"”"
သီချင်းလေး ညည်းရင်း ပြန်လည် ခံစားသွားပါသည်… :D
Ma Ei says: မွန်ကစ်ရေ…
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7
Par Lay Yar Ko says: chit chin dal ma ei yal
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9959
မောင်ပေ says: မေ့တောင်မေ့နေပါပြီ မအိရေ
အခုလို အခန်းဆက်လေးတွေကို တစ်ပို့ စ်နဲ့ တစ်ပို့ စ်ကြား ၊ အချိန်အကြာကြီး မခြားစေချင်ကြောင်း ရယ်ပါခင်ဗျ ။
ဘုရားစေတီတော်များကို ကြည်ညိုစွာ ဖူးမြှော်သွားပါတယ်နော
မမ အညာသူ says: ရှမ်းပြည်ကိုတစ်ခါတစ်ခေါက်မှမေ၇ာက်ဘူးပါဘူး
Ma Ei says: မေ့ နေမှာတော့ စိုးရိမ်ပါတယ်ကိုပေရေ…
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1808
Khaing Khaing says: မအိရေ ……. မရောက်ဖူးတဲ့နေရာလေးကို ရောက်လိုက်ရတယ်ချင် …….. နံပါတ် ၁၁ က ပုံလေးက သိပ်လှတာပဲ ……. ငါးလပိုင်းကသွားထားတာဆိုတော့ သိပ်မကြာသေးဘူးပေ့ါနော် ……….
Ma Ei says: ထားဝယ်သားရေ…
ရှမ်းပြည်ကတော့ ခုပြန်လာလဲ ထပ်သွားချင်တဲ့နေရာပါ…
မိသားစု အလည်သွားဘို့ ကောင်းတဲ့နေရာလေးလို့ညွှန်းလိုက်ပါတယ်…
Mလုလင် says: အစ်မကြီး မအိ ရေ … အဲ့ဒီ့ထဲ က ဘုရား နဲ့ တွဲရိုက်ထားတဲ့ ပုံတစ်ပုံကို (MPS က ဆရာသမား တစ်ရောက်ရိုက်ခဲ့) ကြိတ်ကြိုက်နေတာ ကြာပါပြီ။ ဘယ်မှ ရိုက်ထားတာလဲ မေးဖို့ ကျလဲ လူချင်း ကမတွေ့ဖြစ်ကြ ဆိုတော့ ….. စိတ်ထဲ တနုံ့ နုံ့  ဖြစ်နေတာ။ ခုကျ မှ ဒီ ဘုရား မှန်းသိတော့တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ ….။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 557
YE YINT HLAING says: ခုလည်း နယ်ခြားကင်းစခန်းပါ ။ ဆီဆိုင် နဲ့ ညောင်ရွှေ အတွက်တော့ မဟုတ်တော့ဘူး ။ ဘုရား ကနေ အရှေတောင်ဘက် လမ်းလေး အတိုင်း ဆင်းပီးလျှောက်ရင် သိပ်မကြာ ပီအန်အို ရဲ့ ပီအန်အေ စခန်း ( ဒေသ အခေါ် အဖြူ စခန်း ) ရှိတယ် ။ နောင်ကား ။ နောင်အယ် ။ ကျောင်းချယ် ။ ဘန်းယာဉ် ။ နောင်မွန် စတဲ့ ပတ်ဝန်း ကျင် ကရွာတွေ အကုန်ရောက်ဘူးတယ်ဗျ ။ သုံး လေးနှစ်လောက် နေခဲ့တဲ့ အဲဒီနေရာ လေးတွေကို မကြာခဏ လွမ်းမိပါတယ် ။ ခုလို ဒါတ်ပုံ လေးတွေကို အလွမ်းပြေ ကြည့်ခွင့်ရတဲ့ အတွက် မအိ ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ အဲဒီမှာ နေတုန်းက တခါတလေ နှစ်ယောက်တွဲပီး မကြာခဏ ဘုရားကို ရောက်နေကြဆိုတော့။။။။။။.
MaMa says: အရမ်းရောက်ဖူးချင်တဲ့ နေရာလေးတစ်ခုပါ။
ဓာတ်ပုံတွေက မြင်ကွင်းစုံလို့ ကိုယ်တိုင်ရောက်လိုက်ရသလိုပဲ။
ကက္ကူဘုရား လို့ ဘာ့ကြောင့် ခေါ်တွင်သလဲဆိုတာကိုလည်း သိလိုက်ရပြီ။
ဓာတ်ပုံတွေက လန်းလွန်းလို့ မအိ ခေသူမဟုတ်လို့ မှတ်ချက်ချမိတယ်။
ပုံ ၁ ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။
ပုံတွေ ကြည့်ပြီး လျှောက်လည်ရတာ မောသွားလို့ …ရှမ်းခေါက်ဆွဲ နှင့် တို့ဟူးကြော်…လည်း စားသွားတယ်။
လယ်စောင့်တဲလေးကြည့်ပြီးတော့လည်း မျက်စေ့အပန်းဖြေသွားတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1396
Ma Ei says: ခေသူမဟုတ်လို့ဆိုတဲ့ မှတ်ချက်အတွက် ကျေးဇူးပါနော်…
နှစ်ပွဲလောက်မှာပြီးမြည်းကြည့်မိမှ စားကောင်းလို့ ထပ်မှာရတယ်…
သားဦးမြေးဦး၊ ၀မ်းတွင်းရူး says: ဒီနှစ် တန်ဆောင်တိုင်ရောက်အောင်သွားပါမည်။
Ma Ei says: Mလုလင်ရေ…
မကြာခဏ လွမ်းမိတဲ့နေရာကို လွမ်းစေအောင်
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 759
Yin Nyine Nway says: နောင်ကားရွာက ပအိုဝ့်ရွာတွေထဲမှာ ပိုပြီးစည်ကားပြီး
ဘာသာရေးရော…. လူကြီးတွေကို ရိုသေမှုမှာပါ သူများရွာတွေထက် ပိုတယ်ဆိုရမလားပဲ
ကက္ကူမြှ အကြိုက်ဆုံးကတော့ ဘေးက ချောင်းလေး ပါ
ပြီး၇င် ညောင်ပင်တွေ မြိုနေတဲ့ ဘုရားဟောင်းတချို့
Ma Ei says: ထမ်စမ်းဂူအပြန် ကားဘီးတာရာကွဲသွားတော့
စေတီပြိုထဲက ပေါ်တော်မူ ဆင်းတုတော်နဲ့
shwe kyi says: ရွှေကြည်ရောက်ဘူးတယ် ဒါပေမယ့် အချိန်တော့သိပ်မရခဲ့ဘူး။ ရုံးကအစီအစဉ်နဲ့သွားရတာမို့လေ။
အခုပြန်သွားချင်တယ်အေးအေးဆေးဆေးလေး ဒါပေမယ့် ပိုက်ပိုက်ကမရှိ။
Ma Ei says: ရွှေကြည်လေး…
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1687
char too lan says: ပုံတွေကြည့်ခွင့်ရလို့ကျေးဇူးတင်တယ် ……
Ma Ei says: Comment ရေးပေးတဲ့ ချာတူးလေး ကိုလဲ
pooch says: မအိရေ ရုပ်စုံစေတီက ရှေးလက်ရာလေးလို့ ထင်တာပဲ ။ ကျန်တာကတော့ ရွှေရောင်တ၀င်းဝင်းဆိုတော့ အသစ်ပြုပြင်ထားတာပေါ့နော်။
ဆရာမတွေကို ၀မ်းပန်းတသာနဲ့ ကြိုဆိုကြတာဆိုတော့ ချစ်စရာဓလေ့လို့ ပြောရမှာပေါ့။ သွားပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ ဆရာမများကိုလည်း ချီးကျူးပါတယ်။ လယ်စောင့်တဲ ပုံလေးကို အနှစ်သက်ဆုံးပဲ။
Ma Ei says: မပုခ်ျရေ…
ရုပ်စုံစေတီကလေးလဲ ပြုပြင်ထားတဲ့ လက်ရာပါ…
အဲ့လို မြင်တွေ့ရတာ ၀မ်းသာမိတယ်…
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1211
amatmin says: မအိရေ..
နံပါတ် ၁ ပေါ့ဗျာ..။
ဒါနဲ့ ရွှေဝက်မင်းကို မြင်တော့
သမိုင်းလေးကိုသိချင်လာပြန်လေရော. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1396
Ma Ei says: ဟိုးရှေးရှေးတုံးက အဲ့ဒီနယ်တစ်ဝိုက်မှာ
၀က်တွေက ဓါတ်တော်တွေကို စောင့်ရှောက်ပါသတဲ့…
ညအချိန်ဝက်တွေကူးလာကြလို့ ရွှေဝက်ကူးဘုရားလို့လဲ ဘွဲ့မည်တွင်ခဲ့ပါတယ်…
ပြင်ဆင်ချိန်က ၀က်မင်းအထိမ်းမှတ်ရုပ်ကို ဖျက်လိုက်ကြတဲ့အခါ
ပွဲတော်ရက်တွေမှာ ခိုက်ရန်ဒေါသတွေဖြစ်ပွားကြတာမို့ အစောင့်ရှောက်အဖြစ်
၀က်မင်းရုပ်တု ပြန်တည်ပေးတဲ့အခါမှ ငြိမ်းချမ်းသွားကြတယ်လို့ အဆိုရှိပါတယ်…
Comments By Postမန္တလေးမြို့ကအစားအသောက်တွေ - KZ - kai``ရွာထဲမှာ ဆုံကြတာပေါ့´´ - TNA - အရီးခင်လတ်အထူးတလည် ကျေးဇူး တင်ရှိခြင်း - အရီးခင်လတ် - Foreign Residentအတိတ်က ခြေရာတွေပြန်ကြည့်ရအောင် - အရီးခင်လတ် - ဦးကြောင်ကြီးComment မှာ လူစည်ချင်ရင် (ယတြာ) - အရီးခင်လတ် - Miss Crystallineသို့ ချစ်သောဖေဖေ - အရီးခင်လတ် - Myo Thantနားစွန် နားဖျား ရပ်ကွက်...။ - Ei Kyipyar - kaiအမျိုး ဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ကြမယ် ဆိုရင် ဖြင့် - မိုချို - ရွှေတိုက်စိုးမောင်ပေ ရဲ့ ပုံတိုပတ်စများ - ရဲစည် - မောင် ပေ``ဒေဝေါကြီး လာမှာစိုးတယ်´´ - ခင် ခ - Munetezအိပ်မက်မင်းသမီး - Myo Thant - သူကလေးသဂျီးနောက်ကနေ ဘယ်သူထိုး who? - awra-cho - မောင် ပေ၄ လရှည်ကြာ ရွာထဲမှာ - Myo Thant - ခင် ခလူစွန့်စားမြင့်ကျော်နှင့် ခေါင်းပြတ်နတ်ရုပ်တု (စ/ဆုံး) - ရာမည - မောင် ပေနံရိုးကြံမဆိုင် မြီးရှေ easy cook - weiwei - Miss Crystallineသူတို့ ရောက်လာကြတော့မည်၊ သတိသာ ထား - kyeemite - ဦးကြောင်ကြီးငါ ရဲ့ ငါ မဟုတ်တဲ့ ကဗျာ - သူကလေး - Mobile13တောင်းပန်အပ်ပါသည်။ -etone - သူကလေးကျွန်ုပ်ရောက်ရှိခဲ့သော ကျတ်တို့ဌာနီ - kyeemite - Miss Crystallineကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေက ရတဲ့ အတွေး - သူကလေး - Mr. MarGaမြေမျိုပျောက်ကွယ်ခြင်း - kyeemite - ဦးကြောင်ကြီးရပ်ကွက်မှသည် နိုင်ငံဆီသို. - ရွှေတိုက်စိုး - kaiသမ္မတကြီး ဦးကြောင် အိမ်သာview - Miss Crystalline - မောင် ပေEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77895 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70551 Kyats )naywoonni (67257 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66832 Kyats )cobra (62183 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (59078 Kyats )MaMa (57851 Kyats )Top Posts & Pagesဟေမာနေဝင်း ထောင်မှလွတ်နှင့် အခြားNews
နားစွန် နားဖျား ရပ်ကွက်...။